वायुसेवा निगममा लुटधन्दा : नियुक्ती ओलीको, कमिशन र काम देउवानिकट व्यापारीमार्फत | Online Nepal
मंगलबार, बैशाख ७ २०७८
काठमाडौं । ट्याक्सी ड्राइभरलाई एयरबसको पाइलट बनायो भने त्यो संस्थाको हालत कस्तो हुन्छ रु भन्ने कुराको एउटा उदाहरण बनेको छ, नेपाल वायुसेवा निगम ।
पञ्चायत निरंकुश व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने यो संस्था बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिध्याए । ४६ साल अघि अन्तर्राष्ट्रिय सेवातर्फ ४० प्रतिशतसम्मको बजार हिस्सा निगमले लिइरहेकोमा २०६६ सालमा आएर ३ प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो ।
धमिजा, लाउडा, चेज एयर, चिनियाँ विमान खरिद/भाडा प्रकरणदेखि ठूलठूला घोटाला भए, नेता मोटाए, निगम ‘हाड र छाला’मा रुपान्तरण भयो ।
केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अब निगम सुधार हुन्छ, भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, ओलीले न्यारोबडी खरिद काण्डमा अर्बौ घोटाला गरेर भागेका मदन खरेलजस्तो भ्रष्ट व्यक्तिलाई झापा घर भएकै कारण पुनः निगममा भित्र्याए ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका प्रिय पात्र डिमप्रकाश पौडेल चार्टर एकाउन्टेन्ट भए पनि उनलाई एयरलाइन्स व्यवस्थापनको कुनै अनुभव छैन । उनी निगमका महाप्रबन्धकमा नियुक्ति हुनु अगाडि बतास अर्गनाइजेसनका महाप्रबन्धक थिए ।
बतास अर्गनाइजेसन काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाकी पत्नी आरजु निकट व्यापारी आनन्द बतासको हो।
निगममा पौडेलको नियुक्ति ‘लुट कान्छा लुट‘’ बोलको गीतसँग ठ्याक्कै मिल्छ । महाप्रबन्धकमा पौडेल नियुक्त भएको ६ महिना बित्यो, तर उनले व्यावसायिक योजना बनाउन सकेका छैनन् । बरु निजी क्षेत्र र विदेशी एयरलाइन्ससँग साठगाँठ गरेर कुम्ल्याउनमै व्यस्त छ । यसको एउटा उदाहरण मलेसिया उडान पटक–पटक रद्द गर्नु हो ।
पौडेल निगमको महाप्रबन्धक भएपछि निगमका एयरलाइन्सलाई आवश्यक पर्ने लुब्रिकेन्ट आयल बतासको एउटा कम्पनीमार्फत सप्लाइ गरेर करोडौं कमिशन खाएका छन् । त्यसैगरी पाइलट ट्रेनिङबाट पनि लाखौं डलर खाएका छन् । निगमको पाइलट ट्रेनिङ छरछ महिनामा गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी विभिन्न देशमा जीएसए नियुक्ति गर्दा समेत लुट मच्चाएका छन् । दुबईको जीएसए नियुक्त गर्न पौडेलले एएनटिए भन्ने कम्पनीका भारतीय नागरिक कुमार भन्नेसँग साठगाँठ गरेको निगम स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई निगमभित्र के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले स्वीच थिचेर बालुवाटारमा रमाउनुभन्दा निगममा आएर बुझ्न त्यहाँका कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार विभिन्न पार्टीलाई भुक्तानी दिँदासमेत पौडेलले कमिशन खाने गरेका छन् । त्यसका लागि उनले अर्थ विभाग प्रमुख उमेश पौडेललाई हटाएर अनिषा खड्कालाई ल्याएका छन् ।
दृष्‍टि साप्ताहिकमा खबर छ।
नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धकले आफ्नै मन्त्रीलाई ढाँटे
नेपाल वायुसेवा निगममा मलेसिया टिकट काण्ड , ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर घोटाला !
एमाले प्रवेश गरेको १८ दिनमै व्यवसायी किशोर प्रधान नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक !
अब हवाई यात्रा गर्दा ल्यापटपलगायतका ईलेक्ट्रोनिक्स सामान बोक्न नपाइने
हवाई माफियाको स्वार्थमा वायुसेवा निगमलाई दोहन गर्दै महाप्रबन्धक पौडेल
लापरवाही गर्ने निगमका कर्मचारीलाई कारवाही
विमानमा कोरोना संक्रमितः निगमका तीन कर्मचारीलाई कारवाही
डिमप्रकाश पौडेलनेपाल वायुसेवा निगम
कोरोना संक्रमणका कारण माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व सीईओको निधन
बैंकले २० प्रतिशत कर्मचारी राखेर एकचौथाई मात्रै शाखा खोल्न पाउने
मोबाइल स्वीच अफ गरेर बेपत्ता सचिव एकाएक अख्तियारमा , पंगु बन्यो न्यायपरिषद्
जसपाका ठाकुर र महतोको भारतीय दूतावासमा इन्ट्री
सरकारले ४७२ रुपैयाँमा ल्याएको खोप अब चार गुणा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न हुकमलाई अनुमति, खोपको व्यापार !
नागरिक महामारीमा, नेताजति सत्तालिप्सामा